छोरीलाई बेलायत कसरी पढाए ? ओलीको प्रश्नपछि बाबुरामले गरे यस्तो खुलासाNepalpana - Nepal's Digital Online
छोरीलाई बेलायत कसरी पढाए ? ओलीको प्रश्नपछि बाबुरामले गरे यस्तो खुलासा
नेपालपाना कार्तिक २१ २०७८
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो छोरीलाई कसरी बेलायत पठाए भन्ने बिषयमा स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धका बेला नेता भट्टराईले आफ्ना छोराछोरी कसरी बेलायतमा पढाए त्यो पैंसा कहाँबाट आयो भन्दै कडा प्रश्न गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सम्पर्क कमिटीको आइतवार भएको देउसी भैलो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए ‘जनयुद्धमा प्रचण्ड–बाबुराम त बाँचे। १७ हजार गरिब जनताका छोराछोरी मरे। बाबुरामका छोराछोरी त त्यसबेला बेलायतमा पढ्थे, ‘हामी बेलायत जान भिसा पाउँदैनथियौँ तर उनीहरुका छोराछोरी त बेलायत गएर पढे नि ! त्यसरी पढाउने पैसा कहाँबाट आयो ? , कसरी सम्भव भयो ?’
यसको जवाफमा नेता भट्टराईले आफ्नी छोरीले कसरी बेलायतमा पढेको भन्ने खुलासा गरेका छन् । आइतबार ट्वीट गर्दै नेता भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले उडन्ते, तथ्यहीन कुरा गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘मित्र खड्गप्रसादजी, पूर्वप्रम जस्तो मान्छेले तथ्यहीन उडन्ते कुरा गर्नु शोभनीय भएन’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘हाम्री छोरी मानुषी ७ वर्षको उमेरमा जनयुद्धपूर्व २०४९–५१मा आमा हिसिला छात्रवृत्तिमा बेलायत पढ्न गएको बेला सँगै गएर सँगै फर्केकी हुन्। त्यस यता उनी बेलायत गएको प्रमाणित गर्नोस् न ’
कार्तिक २१, २०७८ आइतवार १८:१९:२२ बजे : प्रकाशित